ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက ပန်းဖြူအမှုကို ပယ်ချ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက ပန်းဖြူအမှုကို ပယ်ချ
ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက ပန်းဖြူအမှုကို ပယ်ချ
သရုပ်ဆောင် ပန်းဖြူက ဧရာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဇော်ဝင်းရှိန်ကို ကာမ လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့မှာ ပလပ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပန်းဖြူရဲ့ ရှေ့နေ ဦးယုတင်က ရက် (၄၀)၊ (၅၀) လောက် အတွင်းမှာ ယောက်ျား တယောက်ကို သိပြီးတော့ ကာမပေးတယ် ဆိုတာ၊ (၄၊ ၅) နှစ်လောက် ကြာအောင် လိမ်လည်ခံရတယ် ဆိုတာတွေဟာ ယုတ္တိမရှိ ဘူးဆိုပြီး တိုင်းတရားရုံးက ပလပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပန်းဖြူကတော့ ဒီအမှုကို ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် လျှောက်ထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျေနပ်လို့နေတုန်းက နေကြပြီး အခုမှသူများတွေမအားတဲ့ကြားထဲက အလုပ်ရှုပ်အောင်လိုက်လုပ်နေကြတယ်၊
ဒီကိစ္စမျိုးတွေဟာ ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသွားတယ်လို့ ပြောလို့ ရသလို
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် ကြားဘူးနားဝကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ မှတ်ယူပြီး
ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် တွက်ဆေးမီးတိုလေးတစ်ခုအဖြစ်တော့ သိမ်းထားလိုက်ပေါ့ကွယ်
မမ ပန်းအနေနဲ့ လည်း နောက်နောင် ခေါင်းမကိုက်နဲ့ ပေါ့ဗျာ
ဟိုဘဲအနေနဲ့ ကလည်း ( သူမှမဟုတ်ပါဘူး သူသူငါငါ တို့ များ လဲပြီးပြီး နဲ့ ကောင်တွေပေါ့ ) ကိုယ်ကတိုက်ပွဲတက်ထားပြီးတော့
တကယ်မခံစားနိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ မသိသလိုနေလိုက်ပေါ့ အခုဟာက ကိုယ်လဲတကယ်ရင်ခုန်တာလဲမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့တိုက်ပွဲတက်ဘူးတယ်ဘာညာနဲ့ ပြောပြီး ဟိုကပန်းကုံးစွတ်တော့လည်း ပတ်ပြေးပြန်ရော
စိတ်မကောင်း စရာပါ ….. တရားဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး ( ဗိုလ်ရွှေမန်းပြောတာ )
ပန်းဖြူ ရေ ပေးနိုင်မှ ရမယ် …..
” Nobody above the law, but i am Nobody ” said Ba Ba Gyi Than Shwe.
သြဂုတ်လ (၂၆) က ပယ်ချလိုက်တာခုမှ သိတယ် . . . ထက်ထက်မိုးဦးရော ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ . . .
ဒီသတင်းက ကြာပြီပဲဟာကို …
website တော်တော်များများမှာ ပါပြီးသားပြီးဗျ
Thursday, 15 July 2010 09:14
Last Updated ( Tuesday, 21 September 2010 09:23 )
ကြာလှပြီ ဒီသတင်းကြီးက … နောက်တော့လည်း အီးရော အီးရောနဲ့ …. မေ့သွားကြတာပါပဲ